Kuzokhishwa izingoma ezintsha sha zikaLundi, engasekho | isiZulu
Kuzokhishwa izingoma ezintsha sha zikaLundi, engasekho
'Ushiye isikhala esikhulu uLundi'
BUKA: Amaculo kaLundi Tyamara esingasoze sawakhohlwa
BUKA: UDr Malinga uculele uLundi noSfiso Ncwane ingoma
Cape Town – Bazohleka bodwa abalandeli besihlabani somculo wowokholo esisanda kudlula emhlabeni, uLundi Tyamara, njengoba kuzokhishwa i-albhamu yalo mculi ebingalindelekile nesihloko sithi Legacy.
Le albhamu izobe ibophele izingoma ezingu-18, kanti kukhona kuzo nezingoma ezine ebezingakaze zizwakale ngaphambilini nezaqoshwa uLundi ngaphambi kokuba adlule emhlabeni ngasekuqaleni kwalo nyaka.
Ingoma yokuqala isihloko sithi Nomakwenzenkani, kanti uyishaye ngokuhlanganyela nomculi womculo wokholo, uFikile Mlomo. Le ngoma yaqoshwa ngo-Okthoba kunyaka ka-2016.
Omunye angathi uLundi ikhona into eyayisimtshela ukuthi sekuzomthatha ukufa njengoba le ngoma ikhuluma ngakho ukufa.
Kuyo ucula athi “noma ngabe yini eyenzeka empilweni yami uyohlale unami”.
Kuzokhumbuleka ukuthi uLundi washona ngokuzuma ngoJanuwari ngemuva koxineka isikhathi eside ephethwe yi-TB yesisu kanye nokugula okuphathelene nesibindi.
OLUNYE UDABA: Kugxekwe ukufakwa kwesithombe sikaLundi engaphilile ezinkundleni zokuxhumana
Kwenye ingoma entsha nesihloko sithi Uyithemba Lami, uLundi ucula ngokuhlanganyela nomngani wakhe omdala, uSipho Mbhele. Ngale kwalokho uLundi uphinde acule ngokuhlanganyela noThinah Zungu engomeni esihloko sithi Uphakeme, waphinde wasebenza noM Siya kwesihloko sithi Zonkizizwe.
Ezinye izingoma ezikule albhamu yilezo ezazishisa izikhotha kusukela ngonyaka ka-1998 okubalwa kuzo ezithi Mphefumlo Wam, Ongqongqozayo kanye nethi Mama. Ayisalanga-ke naleyo esanda kushisa izikhotha kamuva nje ethi Ithemba Lami Likuwe, nokuyingoma ayishaya ngokuhlanganyela neqembu lomculo iJaziel Brothers.
“Okubalulekile ukuthi izingoma ezine zokugcina ziwumsebenzi wokugcina ake wawenza emsebenzini wakhe wonke. Azikho ezinye izingoma ezintsha ozozizwa,” kusho iMenenja kaLundi, u-Anele Hlazo, egcizelela ngokuthi akasoze aba khona umculi oshaya ngezwi elifana nelikaLundi.
Imali ezotholakala ngokudayisa le-albhamu izonikwa izingane ezimbili zikaLundi, uSibonelo, 18, uCandy, 11, kanye nomndeni wakhe.
Ingoma yokuqala ethi Nomakwenzenkani izoqala ukudlala emisakazweni kuleli sonto kanti izokhishwa ngokuphela kukaMashi.